ZeeKwat | Health Archives - Page2of 199 - ZeeKwat
Home » Gallery » Health (Page 2)
ခြင်အကိုက်ခံရ၍ ယားယံနေလျှင် ကုတ်ခြစ်စရာမလိုပဲ ယားယံခြင်းကို ချက်ချင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝနည်းလမ်းများကို မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
(၁) အိမ်မှာ အလွယ်တကူ ရှိနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးကို အနည်းငယ် ညစ်ယူ၍ ခြင်ကိုက်သည့်နေရာကို
ခေါင်းမှာ တွယ်တတ်တဲ့ သန်းတွေဟာ အလွန်သေးငယ်ပြီး အတောင်ပံ မပါတဲ့ အင်းဆက်များဖြစ်ကြပါတယ်။ လူတို့၏ ဦးရေပြားပေါ်တွင် သွေးကိုစုပ်ယူကာ အသက်ရှင်ပြီး တစ်ဦးမှတစ်ဦး အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်သော ကပ်ပါးကောင်များဖြစ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့်
အရမ်းကို အရသာရှိတဲ့ ငါးချိုချဉ်ကြော်လေးချက်စားကြည့်ကြမယ်……
ဒီတစ်ခါတော့ စားလို့အရမ်းကောင်းပြီး လုပ်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်တဲ့ ငါးချိုချဉ်ကြော်ချက်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ငါးကြင်း ၅၀ သား ကြက်သွန်နီ ၄ လုံး ကြက်သွန်ဖြူ ၅ မွှာ
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာတစ်နေ့မှာ နာရီဝက်မျှသူတို့ရုပ်သွင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပူပန်တတ်ကြပါတယ်….
လောကကြီးမှာ လူတိုင်းလှချင်ကြတာပါပဲ။မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောင်္ကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပူပန်လေ့ရှိကြပါတယ်။လေ့လာချက်အသစ်တစ်ခုအရ ယောင်္ကျားလေးတိုင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ဝနေခြင်း ထိပ်ပြောင်နေခြင်းစတဲ့ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သွင်ပြင်အတွက် တစ်နေ့မှာ ၃၅ မိနစ်မျှပူပန်လေ့ရှိကြပါတယ်တဲ့။အ၀လွန်ခြင်းဟာ ယောက်ကျားလေးတွေ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့ အဓိက ပြဿနာဖြစ်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း
ပန်းသီးအစေ့ ဟာ လူကိုအဆိပ်ဖြစ်စေလို့မစားသုံးသင့်ဘူးဆိုတာ သင်သိပါသလား….
ပန်းသီးစေ့မှာ လူကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Cyanide acid တစ်မျိုးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် စားမိသူကိုအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပန်းသီး စားရင်ပန်းသီးကိုခွဲပြီး အစေ့ကိုထုတ်ပြီးမှစားသင့်ပါတယ်။ ဝါးစားမိရင်တော့ ပြဿနာတတ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မသိနားမလည်သေးတဲ့ သုံးလေးနှစ်အရွယ် ကလေးတွေ
ကလေး တွေရဲ့ အနာဂတ် ကို ဆုတ်ယုတ်စေမဲ့ နည်းလမ်း အမှား များကို မိဘတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်…
ကျွန်တော် တို့ ကလေး တွေရဲ့ ဘဝ ဟာ ပျက်စီးလွယ်တဲ့ ပန်ပွင့် လေးတွေလိုပါပဲ။ သူတို့ ငယ်စဉ်က ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ နဲ့ ခံစားချက်တွေက
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးများကို ၅မိနစ်အတွင်း သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း ( ၅ ) မျိူးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
စစ်တမ်းများအရ ၅ရာနှုန်းမှ၆၀ရာနှုန်းသော ကမ္ဘာတဝန်းမှလူများသည် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းကိုခံစားနေရသည်။သင်ဟာနေ့စဉ်ပုံမှန်သွားတိုက်သူဖြစ်တာတောင်မှ တခါတလေခံတွင်းအနံ့ဆိုးဖြစ်ပေါတတ်ပါတယ်။
သွားကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်သင့်တဲ့အပြင် နေ့စဉ် သွားသန့်ရှင်းရေးကိုအလေးထားသင့်ပါတယ်။ သွားကိုတစ်နေ့၂ကြိမ်တိုက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး သွားတင်မက လျှာကိုပါ။ သန့်စင်ပေးရပါမယ်။
သရက်သီးနှင့် နာနတ်သီးကင် အသုပ်ကို သုပ်စားပေးပါက ရရှိနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ….
သရက်သီးနှင့် နာနတ်သီးတို့ရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်နည်းတွေကို လူတော်တော်များများသိကြပါတယ်နော်။ မကြိုက်သူလဲ မရှိလောက်ပါဖူး။ အဲဒီအသီး ၂မျိုးကို သရေစာလို လွယ်ကူစွာ လုပ်စားနည်းလေး ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့အမည်တွေကလဲ အားလုံးဆေးဖက်ဝင်ကြပါတယ်။ လိုအပ်သည်များကတော့
သွားပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းတရားများကို လူတိုင်းသိအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်….
(၁) ရေခဲဝါးစားခြင်း။ ရေခဲဆိုတာ ရေကိုအေးခဲထားတဲ့သဘာဝ ရေအခဲတုံးဖြစ်ပြီး၊ အချိုဓာတ်လဲမပါတာမို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကင်းတယ်လို့ သင် ထင် ကောင်းထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ရေခဲရေများက သွားအတွင်းပိုင်းရှိတစ်ရှုးအပျော့များကို တုန့် ပြန်မှုလျှင်မြန်
ကင်ဆာအတွက် ဂေါ်ဖီထုပ် ဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးပေးသင့်ကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ ရှိထားပါတယ်….
အချို့အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ယနေ့အလွန်ခေတ်စားလှသော ကင်ဆာရောဂါကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် သဘာဝကပေးထားတဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေရှိကြပါတယ်။
ထိုအသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို မိမိတို့နေ့စဉ်စားသောက်နေသော အစားအသာက်များတွင် ထဲ့သွင်းဖြည့်စွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ အလုံးစုံသော ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း